अस्पताल पहाड क्रिमीआ: एक ठाउँमा बाँकी र उपचार
क्रिमीआ को दक्षिणी तट मा आराम वर्ष को कुनै पनि समय राम्रो छ। हावा को अद्वितीय निको गुणहरू, आयोडिन र पाइन सुई, एक लामो समय को लागि जानिन्छ संग गर्भवती। क्राइमन पहाड उत्तरका मा बतास र खराब मौसम देखि तट रक्षा। तिनीहरूले पाइन वन र जुनिपर बगैंचाहरु द्वारा कवर छन्। समुद्र र पहाड हावा को मिश्रण एक निको पार्ने शक्ति र मानव शरीर मा एक सकारात्मक प्रभाव छ। रिसोर्ट्स र sanatoriums को एक ठूलो संख्या क्रिमीआ को दक्षिण मा निर्मित थिए किन कि छ।
अस्पताल "पहाड", क्रिमीआ, Livadia
दक्षिण तट मा, याल्टा को शहर नजिकै एक सय मीटर समुद्र स्तर माथि Livadia को सुरम्य गाउँमा त्यहाँ अस्पताल "पहाड" छ। रिसोर्ट्स भवन 15 हेक्टरमा को एक क्षेत्र एक सुन्दर पार्क मा एक Hillside मा अवस्थित छ। पार्क को बाटोमा, तपाईं स्वास्थ्य को शुल्क दिन पाइन को गंध मा सास, घण्टा हिंड्न सक्छौं। त्यहाँ असंख्य राजसी क्राइमन Pines, पातलो cypresses, एफआइआर सुंदरियों र धेरै अन्य रूखहरू बढ्दै छ। सचमुच अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ) को greenery जोडतोडले। फोटो, तल दिइएका छन् जो, एक स्वास्थ्य रिसोर्ट को सबै आकर्षण मूल्याङ्कन गर्नेछ।
सजिलै सेतो Livadii इम्पेरियल दरबारमा केन्द्र मा जान्छ कि ज्ञात इम्पेरियल बाटो संग काठ मा विशाल पार्क। यो बाटो साथ हिड्ने हरेक सकारात्मक भावना चार्ज र राम्रो मुड दिनेछु। फैशनेबल पहाड क्रिमीआ र नीला समुद्र आँखा खुला strolling पर्यटकहरु, यी प्रजाति indifferent जो कोहीले छोड्न छैन।
समुद्र र समुद्र तट निकटता
यस भू-भाग पहाडी र ठाडो किनभने अस्पताल, एकदम समुद्र देखि उच्च स्थित, ट्रिपिंग छैन सबैको बल हो। समुद्र तट उचाल्न छ गर्न तथापि, सही रिसोर्टमा देखि चिन्ता छैन। एउटा सुन्दर गोरेटो मा समुद्र गर्न हिंड्न क्यालोरी गर्ने बाल्न गर्न सक्नुहुन्छ, वंश बारेमा पन्ध्र मिनेट लाग्नेछ।
अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ) यसको आफ्नै सुसज्जित समुद्र तट छ। यो लम्बाइ बारेमा 250 मीटर, यी स्थानहरूको कि धेरै छ। समुद्र तटीय उद्धार सेवा, चिकित्सा केन्द्र, तौलिया को वितरण को बिन्दु, एक सानो क्याफे र सना संचालित।
अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ) यसको climatotherapy लागि प्रसिद्ध छ। स्थान यो श्वसन प्रणाली पुन: प्राप्ति को लागि पूर्ण अनुकूल छ। ब्रोन्कियल अस्थमा, tracheitis, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भोगिरहेका विरामीहरु, सफलतापूर्वक अस्पताल मा उपचार भइरहेको। व्यवहार यहाँ, सबै को पहिलो, समुद्र र पाइन को मिठाई Smells संग गर्भवती छ, जो हावा नै। यो रिसोर्ट को circulatory र स्नायु प्रणाली रोगहरु को समस्या संग मान्छे स्वीकार गर्दछ।
अनुभवी डाक्टर को स्वास्थ्य सहारा: internists, सर्जन, neurologists। शारीरिक उपचार, electrotherapy, balneotherapy, ओजोन चिकित्सा, मालिश, माटोको र muds Saka अन्य प्रक्रियाहरु: परीक्षा र निर्धारित उपचार विरामीहरु को निदान पछि।
अस्पताल को आधार मा सोभियत संघ को वर्ष मा पुनर्वास र अन्तरिक्ष यात्री को रिकभरी एक केन्द्र थियो।
स्थानीय जलवायु अपवाद बिना लागि अनुकूल छ किनकी, अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ), एउटै ठाउँमा बाँकी र उपचार जोडती। , निवारक पाठ्यक्रम पारित गर्न आराम र vivacity एक शुल्क प्राप्त इरादा संग कुनै पनि चिकित्सा सङ्केत गर्छ बिना सहारा पर्यटकहरु आउन,।
अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ), तपाईंले पाँच भवनहरु यहाँ धेरै, चिकित्सा जटिल कल गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा स्वास्थ्य केन्द्र मा आराम को डिग्री बदलिने को आरामदायक कोठा मा 430 टूरिस्ट समायोजित गर्न सक्छन्।
सबै भन्दा ठूलो भवन - पहिलो। यो एउटा वास्तविक पाँच तले दरबार, धेरै सुन्दर संरचनासँग छ। यो साझा सुविधा संग र-कोठा एकल र डबल कोठा साथै अस्पताल को आधारभूत चिकित्सा आधार घरों।
दोस्रो शरीर पहिलो तीन तलाहरू आसन्न छ। समुद्र र पहाड दृश्य: गैर यो दुई मा सुविधाहरु संग सुधार भएको छ। एक तल्ला सम्पूर्ण सम्मेलन कोठा कब्जा गरिएको छ। भवन जीर्णोद्धार छ।
बाडे नम्बर3- दुई-मंजिल्ला भवन, मुख्य भवन अगाडि स्थित पृथक। यसलाई मा कोठा डबल सान्त्वना वृद्धि।
आवास4दुई फर्श छ। पहिलो तीन देखि थोडा अलग भवन जटिल माथि स्थित। कोठा को एक विशिष्ट सुविधा भूमि तल, जो मार्फत vacationers आफ्नो कोठा प्राप्त एक छत छ। दोस्रो तल्ला मा कोठा balconies छ।
पाँचौ भवन अघिल्लो एक अर्को स्थित र चार फर्श छ छ। भवन जीर्णोद्धार छ, पहिलो र दोस्रो फर्श त्यहाँ उपचार कोठा छन्। कोठा एकल र डबल मानक श्रेणी छन्।
दुई-मंजिल्ला भवन, दायाँ समुद्र द्वारा स्थित - गर्मी मा, अतिथि klimatopavilon लाग्छ। आंशिक conveniences संग स्थित यहाँ डबल अर्थव्यवस्था कोठा।
वीआईपी ग्राहकहरु एक्लै उभिरहेको एक-कथा काठ घरमा रहन सक्छ। भवन मात्र एक डिलक्स कोठा, यसको भान्सा र veranda संग छ।
को कोठा को मूल्यहरु सुविधाहरु, आराम, बाहिर निस्कन दक्षिण वा उत्तर, साथै वर्ष को समय मा निर्भर। स्वास्थ्य रिसोर्ट अतिथि सबै वर्ष दौर, पाठ्यक्रम, को जाडो छुट्टी सिजन र उपचार को लागत मा लगभग दुई पटक कम द्वारा स्वागत र।
यस रिसोर्टमा मा खानपान
साइट स्पा जटिल मा छुट्टै भवन - भोजन कोठा मा आयोजित पर्यटकहरु खानपान।
सायद बुफे सिस्टम (40 अतिथि को एक न्यूनतम संग) वा साप्ताहिक मेनु मा भोजन। अर्थव्यवस्था कोठा भोजन अतिथि मात्र साप्ताहिक मेनु मा बाहिर।
रोगी आहार दर्ता छ भने, तपाईंले मुख्य कुक सूचित गर्नुपर्छ। त्यसपछि अतिथि विशेष मेनु संगठित गरिनेछ।
पूर्वाधार अस्पताल जटिल "पहाड"
बाँकी अनिवार्य भएको steppe भाग प्रायद्वीप मा भन्दा बढी सक्रिय Sukaczev। पार्क को alleys मार्फत हिड्ने - यो स्थिर descents र ascents छ। र सबै छ। बाहिरी गतिविधिहरु र रिसोर्ट प्रेम अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ:
न्यानो नुन पानी संग शानदार इनडोर स्विमिंग पूल सेप्टेम्बर मई देखि अतिथि लागि प्रतीक्षा छ;
शारीरिक फिटनेस कायम गर्न उपलब्ध सिमुलेटर;
भलिबल र बास्केटबल त्यहाँ सुसज्जित छन् खेल मैदान को प्रशंसक लागि;
टेबल टेनिस तालिका;
बच्चाहरु र वयस्क, प्रतियोगिताहरु र घटनाहरूको संगठनको लागि एनिमेशन;
शान्त बाँकी को प्रशंसक पनि, नरमाइलो लाग्यो हुने छैन। यो जटिल रेस्टुरा, धेरै बारहरू, एक सिनेमा, एक पुस्तकालय, एक सना र अवकाश को अन्य ठाउँहरूमा पनि समावेश छ।
को अस्पताल इलाका केही भागहरु मा वाइफाइ क्षेत्र छ। त्यहाँ पार्किङ सुरक्षित, एक दोकान, एक hairdresser छ। प्रशासन रिसोर्टमा क्रिमीआ को स्थानान्तरण र पर्यटन व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यो रिसोर्ट याल्टा क्रिमीआ को मोती देखि केवल आठ किलोमिटर केप ऐ-Todor मा स्थित छ। Livadia - धेरै शान्त र आरामदायक गाउँमा। पडोस कुनै कम प्रसिद्ध अस्पताल "Kurpaty" मा एक "पहाड" छ।
को "पहाड" को धेरै स्थान धेरै राम्रो छ। सार्वजनिक परिवहन गर्न पैदल दूरी मा। यस वरपर मा क्रिमीआ को दक्षिणी तट को आकर्षण को एक ठूलो संख्या हो: Livadia महल, याल्टा embankment, चिडियाघर, दन्तिये, जलजीवालय को Glade, Swallow गरेको नेस्ट, एक dolphinarium र क्रिमीआ धेरै अद्वितीय ठाउँहरू।
पर्यटकहरु को समीक्षा
अस्पताल "पहाड" (क्रिमीआ), जो को समीक्षा एकदम राम्रो हो, यो क्रिमीआ अन्य रिसोर्ट्स बीच एक उच्च मूल्याङ्कन छ।
लगभग सबै टूरिस्ट परिसर को एक महान क्षेत्र भन्नुहोस्। धेरै मल र अद्वितीय बिरुवाहरु संग पार्क क्षेत्र indifferent जो कोहीले छोड्न छैन। प्रकृति सुन्दर रूपकहरुको लेख्न अतिथि प्रेरित गर्छ।
निको समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक आधारित। कर्मचारी व्यावसायिकता, सरलता र कर्मचारी को आतिथ्य टिप्पणी। Vacationers मालिश चिकित्सक, एकयुपंचर मा विशेषज्ञहरु, माटोको उपचार, आदि प्रशंसा
निःशुल्क निर्देशित पर्यटन संगठित र अद्वितीय ठाउँमा हिँड्छ जो गाइड अस्पताल, मा धेरै सकारात्मक समीक्षा।
खाना सन्दर्भमा, राय विभाजित भएको थियो। पाहुनाहरूको केही संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र बाँकी व्यञ्जन एउटा सानो विविधता कुरा थियो। यो धेरै सानो गुणस्तर बारे उजुरी, तर उनीहरू त्यहाँ अझै पनि छन् कि टिप्पण लायक छ। स्वाद नभएको भोजन भनिन्छ केही समीक्षा मा।
नकारात्मक टिप्पणी मुख्यतः मूल्य निर्धारण नीति चासोको विषय। बिदा अतिथि को लागत अन्तिम वर्ष मूल्यहरु एकदम पुगेको छ विशेष गरी, र यस्ता अवस्था थप छैन, बढाइचढाइ जस्तो देखिन्छ।
Vacationers यो रिसोर्ट गर्न धेरै पटक आएको लेख्न र यो शायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक हो। यदि मान्छे यहाँ फिर्ता आउन - त्यसैले बाँकी योग्य छन्।
क्लिनिक "मेडिसिया" (इजस्क) - समीक्षा
कसरी इस्राएलमा uterine क्यान्सर उपचार गर्न?
फोक्सो क्यान्सर उपचार विदेश - इस्राएलमा ओन्कोलोजी
उज्बेकिस्तान को स्वास्थ्य रिसोर्ट: सूची, एक संक्षिप्त विवरण
कामा जलाशय र पारिस्थितिकी तंत्रमा यसको प्रभाव
दुनिया मा सबै भन्दा ढिलो कार के हो?
प्रतिरक्षा प्रणाली स्तरवृद्धि गर्ने उत्पादन
Fitolamp बोट: ग्राहक समीक्षा
मिश्रको सजावट - परिष्कृत र मूल
एक फल वा तरकारी: एक टमाटर के हो?